Noho Ny Fanangonam-bola Avy Amin’ny Mpamaky, Hampiakatra Ny Raharaha Nitorian’ny Orinasa Fitrandrahana Volamena Azy Ny Tranonkalam-baovao Malaysiakini · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2018 6:35 GMT
Birao Malaysiakini. Sary Flickr avy amin'i fuzheado (CC BY-SA 2.0)
Nanapa-kevitra ny Fitsarana Ambony ao Malezia tamin'ny 12 Janoary fa nanala baraka ny Tobim-pitrandrahana Volamena Aostraliana Raub (RAGM) tamin'ny alalan'ny andian-dahatsoratra momba ny loza ara-pahasalamana ateraky ny fiitrandrahana manakaiky toerana iainan'ny olona ny tranonkalam-baovao Malaysiakini.
Nodidiana handoa vola 90.000 dolara Amerikana noho ny fahavoazana sy ny fandaniana ara-pitsarana ity tranokalam-baovao tsy miankina ity. Nokianin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona samihafa ny didim-pitsarana, mahita izy ireo fa famelezana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ity raharaha ity.
Amin'ny ezaka hampiakatra ny didim-pitsarana eny amin'ny fitsarana ambony, nahavita nanangom-bola ho an'ny tolony ara-pitsarana ny Malaysiakini tamin'ny alalan'ny fangatahana fanomezana avy amin'ireo mpamaky azy.
Iray amin'ireo tranokalam-baovao be mpamaky indrindra ao amin'ny firenena ny Malaysiakini ary efa nahazo loka avy amin'ny International Press Institute, Reporters without Borders sy ny Komity Mpiaro ny mpanao gazety ny fitantarana ataony. Efa nisy nanafika ny tranokalam-baovao tamin'ny lasa, nahazo fandrahonana ara-pitsarana sy ara-teknika, indrindra nandritra ny fotoanan'ny saritaka ara-politika.
Nametraka fitoriana fanalam-baraka ny RAGM rehefa avy namoaka tati-baovao telo sy horonan-tsary roa tamin'ny 5 Septambra 2012 mikasika ny olana ara-pahasalaman'ny mponina ao amin'ny faritra afovoan'i Pahang, izay iasan'ny RAGM amin'ny fitrandrahana volamena ny Malaysiakini.
Tamin'ny taona 2016, nolavin'ny Fitsarana Ambony ao Malezia ny raharaha. Saingy tamin'ny 12 janoary 2018, nohamafisin’ ny Fitsarana Ambaratonga Ambony ny didim-pitsarana taorian'ny fandinihana ny fitantarana nataon'ny Malaysiakini. Nilaza ny didim-pitsarana fa tsy malina ny tranokalam-baovao noho ny tsy fahazoany ny momba ilay orinasam-pitrandrahana. Nandritra ny fotoam-pitsarana voalohany, nilaza ny Malaysiakini fa nitantara fotsiny ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo vondrona ao an-toerana momba ny lova manimba ateraky ny fitrandrahana ao amin'ny faritr'izy ireo izy.
Nilaza fa hampiakatra ny didim-pitsarana ny Malaysiakini. Ho azy, raha mbola mitazona ny heviny ny RAGM, niditra tamin'ny dingana famaram-pananana ny orinasa taorian'ny fatiantoka ara-bola. Tsy fantatra raha niteraka fandrisihana fanampiny ho an'ny RAGM izany mba hanohizana ny raharaha.
Nanaitra ireo vondrona marobe ny didim-pitsarana, satria mety hametraka ohatra ho an'ireo orinasa lehibe mba haneriterena ny haino aman-jery tsy miankina izay mikasa ny hitantara ny asan'izy ireo.
Iray amin'ireo nitsikera ny didim-pitsarana ny Komitin'ny Asa Fandraràna ny Sianira:
Maneho ny ahiahinay izahay fa ny habetsaky ny vola nangatahan'ny RAGM dia mety hitarika ny haino aman-jery tsy hamotopototra sy hitatitra ny olana momba ny tombontsoam-bahoaka izay mahakasika ireo orinasa lehibe. Vao mainka hampihena ny fahalalahan'ny media ao amin'ny firenena izany.
Nanizingizina ny Reporters Without Borders (RSF) fa tsy tokony holazaina ho asan-jiolahy ny asa fanaovan-gazety:
Tsy azo ekena velively sy tsy mifandanja izany hoe mpanao gazety lasibatry ny dingana ara-pitsarana noho ny fanatrehana fotsiny ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mikasika ny tombontsoam-bahoaka.
Mihevitra ny sasany fa misy ambadika politika ny didim-pitsarana. Sarawak Report nilaza fa natao hanorisorenana ny Malaysiakini sy ny fampahalalam-baovao tsy miankina hafa izany:
Mandrahona hanimba ny asan'ny fampalalam-baovao antserasera tsy miankina malaza indrindra, mahomby sy mieli-patrana ao Malezia izany herinandro vitsy monja talohan'ny nampahafantaran'ny praiminisitra ny fikasany hirotsaka hofidiana indray tao anatin'ny tantara ratsy niresaka kolikoly goavana, izay mitentina miliara dolara amin'ny halatra volam-bahoaka nataony manokana.
Teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 1950 ny antokon'ny fitondrana ao Malezia. Voampanga ho nanangona vola an-jatony tapitrisa dolara tamin'ny fifanaraham-barotra tsy ara-dalàna tamin'ny orinasam-panjakana momba ny famatsiam-bola ny Praiminisitra Najib Razak. Efa nitory an'ny Malaysiakini indray mandeha i Najib noho ny famelana fanehoan-kevitra manala-baraka iray ao amin'ny tranonkalany.
Manoratra ao amin'ny Asia Sentinel, nanamarika i Mariam Mokhtar fa ny didim-pitsarana dia azo sokajiana ho sazy sy “fampitandremana ho an'ireo gazety hafa mba hitandrina tsara” rehefa mitatitra momba ireo olana mety hisy fiantraikany amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana .
Mihevitra kosa ny sasany fa manana fifandraisana ara-politika mahery vaika ny RAGM izay nahafahany nampiakatra ny raharaha, na dia teo aza ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Ambony tamin'ny taona 2016.
Sary tao amin'ny Facebook
Taorian'ny fanambarana ny didim-pitsarana tamin'ny 12 Janoary, nangataka fanomezana avy amin'ny vahoaka avy hatrany ny Malaysiani mba ho ampiasaina amin'ny fandaniana amin'ny fiarovana azy. Mpanohana teo amin'ny 2175 teo no nandray anjara tamin'ny fanangonam-bola ho fiarovana azy tao anatin'ny 12 andro monja.
Nisaotra ireo rehetra nanohana ny orinasa ny talen'ny Malaysiakini, Premesh Chandran:
Mahavariana fa voaangona tao anatin'ny 12 andro monja ny vola. Nampiseho izany fa nanohana ny ezaka natao amin'ny fitantarana momba ny olan'ny fiarahamonina ny vahoaka.
Amin'ny anaran'ny mpiasan'ny Maleiakini, misaotra ireo mpandray anjara sy ireo rehetra nanohana anay tamin'ny fanahy izahay.
Nampanantena i Premesh Chandran sy ny tonian-dahatsoratry ny Malaysiani, Steven Gan fa tsy handiso fanantenana an'ireo mpanohana azy:
Tsy nisy ny tremalahy (mpanankarembe), tsy nisy ny fanohanana avy amin'ny orinasa hafa. Ny olona toa anao ihany – mpandray karama, mpiasa tena, mpisotro ronono- no nanome vola niaretana mafy vao azo, ho an'ny famatsiam-bola. Izany fanahy izany no hampiroboroboinay eo amin'ireo mpiasa ao amin'ny Malaysiakini. Ary izany fanahy izany no tianay hita eo anivon'ireo mpanohana anay sy eo amin'ireo Maleziana rehetra.
Nilaza ny Malaysiakini fa hampakatra ny raharaha eo anoloan'ny Fitsarana Federaly.